Madaxweyne Afrikaan ah oo maalmo ka hor dib ugu guuleystay mar lixaad doorasho oo maanta la dilay – Calanka.com
Madaxweyne Afrikaan ah oo maalmo ka hor dib ugu guuleystay mar lixaad doorasho oo maanta la dilay
Madaxweynaha dalka Chad Idriss Deby ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dalkaasi, sida ay warbaahinta ka sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada.
Madaxweynaha ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar kusoo qaadeen jabhadda Front ee dalkaasi ka jirta xilli ay dagaal kala hortageen ciidamo uu isaga hoggaaminayay.
Idiriss Deby ayaa maalintii isniinta lagu dhawaaqay in uu mar lixaaad ku guuleystay doorasho ka dhacday dalkaasi.
Madaxweynaha la dilay ee Chad Idriss Deby Itno, ayaa xukunka hayey in ka badan 30 sano, waxaana maanta uu u geeriyooday dhaawac soo gaaray isaga oo ka qeyb qaadanaya dagaal ay dowladda kula jirto mucaaradka oo ka socda waqooyiga dalkaas, waxaa sidaas sheegay ciidamada.
Deby, “ayaa hadda neefsaday neeftii ugu dambeysay ee difaaca madax-banaanida dalka, isaga oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka,” waxaa sidaas war-saxaafadeed laga aqriyey taleefishinka dowladda ku yiri afhayeenka ciidamada General Azem Bermandoa Agouna.
Mucaaradka Chad oo fadhiggoodu yahay jiidda waqooyi ee Libya ayaa maalinkii doorashada soo weeraray xuduudda, waxayna boqolaal km kusoo siqeen koonfurta dalka.